ကြက်ခေါင်းဆိတ်မခံတဲ့ ရွိုင်ကိန်းနဲ့ ကာရေဂါတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲက ဆိုးလ်ရှားအရှိတရားကို ဖော်ဆောင်နေတာလား? – Sports A2Z
ကြက်ခေါင်းဆိတ်မခံတဲ့ ရွိုင်ကိန်းနဲ့ ကာရေဂါတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲက ဆိုးလ်ရှားအရှိတရားကို ဖော်ဆောင်နေတာလား?
ယူနိုက်တက်နဲ့ လီ​ဗာပူးလ်အသင်းတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဒုတိယအကျော့ပွဲစဥ်အဖြစ် သတ်ပုတ်ကြတော့မှာဖြစ်ပြီး ကွင်းထဲက ကစားသမားတွေရဲ့ အမုန်းတရားတွေနဲ့ထပ်တူ ကြက်ခေါင်းဆိတ်မခံတဲ့ ရွိုင်ကိန်းနဲ့ ကာရေဂါတို့ရဲ့ ကွင်းပြင်ပတိုက်ပွဲကိုပါ မသိကျိုးကျွံပြုမရတဲ့အနေအထားပါ။
လီဗာပူးလ်ဟာ ပြီးခဲ့နှစ်က ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီး ​ခြေအမှန်ဆုံးအသင်းအဆင့်ကနေ ဒီရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက်တောင် မရေရာမှုတွေရှိလာချိန်မှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ လက်စားချေလိုခြင်းက အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဆင့် ၂ မှာ ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက လီဗာပူးလ်ရဲ့အနောက် ၃၃ မှတ်ပြတ်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်က ခါးသီးရန်ဘက်ရဲ့ပြတိုက်ထဲ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၁ လုံးတိုးသွားခဲ့တာကို နာနာကျည်းကျည်း ရပ်ကြည့်နေခဲ့ရပြီး ဒါက ဆိုးလ်ရှားရဲ့ဖိအားလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ အိပ်မက်က လီဗာပူးလ်ရဲ့ ပြည်တွင်းလွှမ်းမိုးမှုကို ပြန်ဖြုတ်ချဖို့ အဓိကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှာ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ လီဗာပူးလ်ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ရွိုင်ကိန်းက ကြိုတင်ခန့်မှန်းယူခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာ သူ့ရဲ့အမြင်က မှန်ကန်သွားခဲ့တယ်။
ကြက်ခေါင်းဆိတ်မခံတဲ့ ရွိုင်ကိန်းနဲ့ ကာရေဂါတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲကနေ ဆိုးလ်ရှားအရှိတရားကို ဖော်ဆောင်ခဲ့တာက သူ့အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို​ပါ သိမ်းပိုက်ဖို့တော့ လိုအပ်နေသေးပေမယ့် ယူနိုက်တက်ကို ဆွဲတင်ဖို့ နောက် ၁ နှစ်အချိန်ထပ်ယူရဦးမယ်ဆိုတဲ့ စကားက လာမယ့်ရက်မှာ ကစားမယ့် လီဗာပူးလ်ပွဲကို ဆိုးလ်ရှားမျက်နှာပန်းလှလှ အနိုင်ယူဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပါ။
” ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုးလ်ရှားကို နောက်တနှစ်အချိန်ပေးရမယ်လို့ မြင်တယ်။ သေချာပေါက်ပဲ။ နောက်တနှစ်အထိ သူ့ကို အပြည့်အဝထောက်ခံရမယ်။ ယူနိုက်တက်က ထိပ်သီးအဆင့်ကို ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်ဗျာ” လို့ ရွိုင်ကိန်းရဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်က ဟောကိန်းအတိုင်း တကယ်မှန်ကန်လာခဲ့ပြီလို့ မှတ်ချက်ချက်ရမယ်။
ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ ကလော့ပ်ရဲ့အသင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို့ တပြိုင်တည်းမှာပဲ အနိုင်ရခဲ့ရင် သေချာပေါက် အဆင့်ကွာဟချက်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်သလို တဖက်က ယူရိုပါလိဂ်ဖလားအိပ်မက်ကလည နောက်တဆင့်တက်လာခဲ့ကြောင့် ဒီနှစ်မှာ ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံအဖြစ် အောင်မြင်မှုတခုကို စတင်သိမ်းပိုက်ပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့ခေတ်သစ်ကို ပုံသွင်းတော့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက စိတ်ဝင်စားစရာတခုလည်းရှိနေကြောင်း တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းသွင်းဂိုးတွေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဗိုလ်ဝင်ခံဖို့ အသင့်ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီး